मात्र ७ लाखमा किन्नुहोस् विद्युतीय नयाँ कार, ४० पैसा खर्चमा १ किमी यात्राको मज्जा लिनुहोस् – Kavrepati
Home / आर्थिक / मात्र ७ लाखमा किन्नुहोस् विद्युतीय नयाँ कार, ४० पैसा खर्चमा १ किमी यात्राको मज्जा लिनुहोस्
admin September 9, 2021	आर्थिक Leaveacomment 99 Views
काठमाडौ । महंगो पेट्रोल र डिजेलले आम मानिसलाई समस्या परेको छ। नेपालमा मात्रपनि पेट्रोलको मुल्य १३० रुपैयाँ प्रति लिटर पुगेको छ । भारतमापनि पेट्रोल निक्कै महंगो छ ।
यो अवस्थामा बिद्युतीय कारहरुको बिक्री बिस्तारै बढ्दो छ। यसैबीच भारतमा गज्जबको विद्युतीय कार आएको छ । मुम्बईस्थित एक स्टार्टअप कम्पनीले यस्तो इलेक्ट्रिक कार ल्याएको हो । जसलाई कम्पनीले संसारको सबैभन्दा सस्तो इलेक्ट्रिक कार भन्दैछ।
बुकिङ्ग खुल्ला यो इलेक्ट्रिक कार स्ट्रोम मोटर्स कम्पनीद्वारा पेश गरीएको हो । यो अहिले मात्र १० हजार भारु नेपालमा भए मात्र १६ हजारमा बुकिङ्ग हुँदैछ । तपाईलाई स्मरण गराऔँ नेपालमा विद्युतीय सवारीमा कर छुट दिइएको छ ।
अरु सवारीमा २ सय प्रतिशत कर लाग्छ भने विद्युतीयमा मात्र एक प्रतिशत भन्सार कर तिरे पुग्छ । यसैले भारतको मुल्य नै नेपालको मुल्य हो । कम्पनीले अहिले भारतमा यसको बुकिङ्ग सुरु गरेको छ। हात मुम्बई र दिल्लीमा मात्र १०,००० को एक प्रारम्भिक रकम तिरेर पूर्व बुक गर्न सकिन्छ।
कार को आश्चर्यजनक रूप यो कारको लुकको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, यो इलेक्ट्रिक कार तीन पाङ्ग्रे छ । तर यो तीन पाङ्ग्रे जस्तो देखिदैन । यो कारको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो हो कि यसको अगाडि एक पाङ्ग र पछाडि दुई तीन पाङ्ग्रा भएको ट्याम्पो जस्तो छैन। की यसको ठीक उल्टो छ। अगाडी दुई पाङ्ग्रा नै भएकाले यो कार जस्तै देखिन्छ ।
तपाइ यो इलेक्ट्रिक कारको रेस देखेर छक्क पर्नुहुनेछ । किनकि यो अगाडि दुई पाङ्ग्रा र पछाडि एक फ्लाईव्हीलसँग एकदम फिट गरीएको छ। फ्लाईव्हील विमानको जस्तो छ । यो सानो तीन पाङ्ग्रे कार संसारको सबैभन्दा सस्तो इलेक्ट्रिक कार भनिएको छ।
अब बुकिङ्गमा धेरै छुट स्ट्रोम मोटर्सका अनुसार यसको बुकिङ्ग अबको केही सातासम्म खुल्ला रहनेछ। शुरुवात ग्राहकहरु रु ५०,००० को मूल्यवृद्धि बाट लाभान्वित हुनेछन्, जसमा आफूलाई मनपर्ने रंग विकल्प, प्रीमियम अडियो प्रणाली र तीन बर्ष को लागि निःशुल्क मर्मत सम्भारको सेवा दिइनेछ ।
अर्को अनौठो त के छ भने यसमा अत्यन्तै क्षमतावान व्याट्री जडान गरिएको छ । एक पटकको चार्ज मा २०० किमी यात्रा गर्न सकिन्छ । स्ट्रोम आर ३ एकल चार्जमा करिब २०० किलोमिटर यात्रा गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। यो एक फोर जी जोडिएको डायग्नोस्टिक इन्जिन छ, जसले चालक ट्र्याक स्थान र चार्जको स्थिति बारम्बार बताउँछ।
कम्पनीका अनुसार यो दुई सिटर इलेक्ट्रिक कारको डिलिभरी यस बर्षको बुकिङ्गबाट २०२२ बाट सुरु हुनेछ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार कम्पनीले अहिलेसम्म यसको मुल्य मात्र चार लाख ५० हजार राखेको छ । नेपालमा यो सात लाख २० हजारमा नै आउँनेछ ।
एक किलोमीटरको यात्रामा मात्र ४० पैसा खर्च कम्पनीको दावी यो छ कि कार विशेष गरी शहरमा दैनिक ५० देखि ८० किलोमिटर भित्र यात्रा गर्न चाहनेहरुलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरीएको हो। यो कार चलाउने लागत प्रति किलोमीटर मात्र ४० पैसा छ। यो कार तीन भेरियन्टमा उपलब्ध हुनेछ।
Previous त्यो दिन बिहानै घर बाट ५ बजे नै बारीमा निस्किएका तेजबहादुर….
Next गर्भवती महिलाले बिर्सिएर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम, नत्र खेर जान सक्छ बच्चा !
काठमाडौं – आज साताको छैटौ दिन शुक्रबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरी घटेको छ …